Tag: crazyegg | Martech Zone
Fivarotana an-tserasera: mamantatra ireo trondro mividy ny Prospect anao
Alahady 8 Janoary 2017 Alahady 8 Janoary 2017 Frank Bria
Ny iray amin'ireo fanontaniana matetika maheno ahy dia: Ahoana no ahalalanao ny hafatra hampiasanao amin'ny pejin-tranonkala na fampielezana doka? Fanontaniana mety io. Ny hafatra diso dia handresy ny famolavolana tsara, ny fantsona mety, ary na dia ny fanomezana lehibe aza. Ny valiny dia, mazava ho azy, miankina amin'ny toerana misy ny fanantenanao amin'ny tsingerin'ny fividianana izany. Misy dingana lehibe 4 amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Ahoana no ahafahanao milaza hoe aiza ny fanantenanao
Aiza no tsidihin'ny mpitsidika bilaogy?
Alatsinainy 2 Febroary 2015 Asabotsy Jolay 8, 2017 Douglas Karr
Efa elaela izahay no miasa amin'ny kinova Martech vaovao. Mbola manana sakana sasantsasany tokony hihoarana isika rehefa mamadika ny fisehosehoana ankehitriny ho lasa layout mifandray kokoa izay mora ampiasaina amin'ny mpivarotra hitady sy hikaroka ny fividianana haitao manaraka. Iray amin'ireo fitsapana lehibe nataonay ho fanomanana ny fanesorana ny endrika fikarohana ao anatiny (samy nanandrana ny fikarohana WordPress sy ny fikarohana nataon'ny Google izahay) ary nanolo azy